funny Archives - VPS - Shweman Online Media
သဘောထားကွီးခကျြ…. မာစီဒီးကား ငှတေဈကပျြဖွငျ့ ရောငျးမညျ နစေ့ဉျထုတျသတငျးစာမြားတှငျ အောကျပါအတိုငျး ကွျောငွာတဈခုပါလာသညျ – မာစီဒီးကား ငှေ ၁ ကပျြဖွငျ့ ရောငျးမညျ လကျရှိအသုံးပွုနသေော မာစီဒီးကားကို ငှေ ၁ ကပျြဖွငျ့ ရောငျးမညျ။ စိတျဝငျစားသူ လူကိုယျတိုငျ လာရောကျဆကျသှယျပါ။ ဦးရာလူရောငျးမညျ။ ဒျေါ… … …… … .
ဆရာ မ သား ကို ဖိုးထောင် ဖင်ချတယ်။ဟေ ငြိမ်းမောင် တိုင်လိုက်သည့် စကားကြောင့် ဆရာမ ငေါက်ခနဲ မတ်တပ် ထရပ်လိုက်သည်။ သူတိုင်လိုက်သည်ကိုတော့ အတန်းထဲမှ မည်သူမှ မကြားလိုက် ဖိုးထောင် လာစမ်း ဆရာမ ခေါ်လိုက်တော့ တစ်တန်းလုံး အသံတိတ်ပြီး ဖိုးထောင်အား စိတ်ဝင် တစားကြည့်ကြသည်။ ဖိုးထောင် ကား
ကျော်ကျော်၊ ညီထွဋ်ခေါင်နဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦးတို့ သူငယ်ချင်းသုံးယောက်က အနုပညာလုပ်ငန်းတွေမှာ ကိုယ်စီအောင်မြင်မှုရရှိနေသလို အားပေးသူပရိသတ်လည်း အခိုင်အမာရရှိထားသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်ကျော်၊ ညီထွဋ်ခေါင်နဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦးတို့က အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေလည်း လုပ်ကိုင်နေသလို အားလပ်ချိန်တွေမှာလည်း ပရိသတ်တွေ ရယ်မောပျော်ရွှင်စေဖို့ ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေကို မျှဝေတင်ဆက်ပေးလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ကျော်ကျော်၊ ညီထွဋ်ခေါင်နဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦးတို့ သူငယ်ချင်းတွေက ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ချိုချို၊
စိတ်ရှုပ်စရာတွေ စိတ်ပူပန်စရာတွေများနေတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ စိတ်အပန်းဖြေတတ်ဖို့ဆိုတာ သေချာပေါက် အရေးကြီးပါတယ်နော်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စသေးသေးလေးတွေနဲ့လည်း စိတ်ရှုပ် စိတ်တိုရတဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ ဘာကိုမှ စိတ်ရှုပ်မခံဘဲ ဖြစ်သလိုလုပ်ထားတဲ့ ပုံရိပ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်သလိုလုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် ကိုယ်တိုင်အတွက်သာမက ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တာကို တွေ့ရမှာပါနော်။ ၁။
မနက်အိပ်ယာထတော့ covid 19အကြောင်းတွေတက်လာတော့ ခုချာတိတ်ကလေးကို ကိုတက်လူ(fb account)ကတင်ထားတာတွေ့ လိုက်ရတယ် ဒီချာတိတ်လုပ်ပုံကလည်း ခပ်ဆန်းဆန်းခမျ အရွယ်နဲ့ မလိုက်မြင်းကြီးစီးပြီးမုန့် လာဝယ်တာတဲ့ ဒါလည်းပြောရမယ်ဆို ၃ပေအကွာကနေ ဆိုတော့ covidစည်းကမ်းကိုလိုက်နာတာဘဲလေ ဒီချာတိတ် video လေးကြည့်ပြီး တွေးမိတယ် ငါလည်း ၃ပေအကွာကနေ၀ယ်ဖို့ မြင်ဝယ်စီးမှထင်တယ်လို့ … Vedio အောက်မှာပါပါတယ်… credit